हाम्रो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठूलो पिण्ड सूर्य | Ratopati
personज्ञानमित्र exploreकाठमाडौं access_timeफागुन ५, २०७६ chat_bubble_outline0
पहिला प्रकाशित दुबै लेख पढेर तिमीहरूलाई थाहा भयो होला हामी बसेको सौर्यमण्डलको केन्द्र सूर्य हो । सौर्यमण्डलमा रहेका सबै पिण्ड (ग्रह, वामन ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि) सबैले सूर्यको परिक्रमा गर्छन् । तर यो प्रमाणित रूपमा थाहा भएको धेरै समय भएको छैन । सन १५४३ भन्दा पहिलासम्म के विश्वास गरिन्थ्यो भने ब्रह्माण्डको केन्द्र हामी बसोबास गर्ने पृथ्वी हो । यस मान्यतालाई भू–केन्द्रित (जिओसेन्ट्रिक - Geocentric model) अवधारणा भनिन्थ्यो ।
ग्रीक दार्शनिक प्लेटो र उनका शिष्य अरिस्टोटलले ‘भू–केन्द्रित मोडेलको’ परिकल्पना गरेका थिए । क्लाउडिअम टोलेमीले (Claudium Ptolemy) यस मोडेलको सैद्धान्तीकरण गरेका थिए ।
विश्वले झण्डै १५ सय वर्षसम्म ‘टोलेमीले प्रचारित गरेको 'जिओसेन्ट्रिक मोडेल’लाई मान्नु पर्‍यो ।
सन् १५४३ मा पोल्याण्डका खगोलविद् निकोलस कोपरनिकसले ‘जिओसेन्ट्रिक माडेल’ लाई खारेज गर्दै सर्वप्रथम ‘सूर्य–केन्द्रित' (हेलियोसेन्ट्रिक-Heliocentric Theory ) मोडेलको चर्चा गरे ।
कोपरनिकस । http://www.messagetoeagle.com
कोपरनिकसको 'हेलियोसेन्ट्रिक’ अवधारणाले पृथ्वीको सट्टा सूर्यलाई केन्द्र भएको प्रमाणित गर्‍यो । यस मान्यतालाई प्रमाणित गर्न ग्यालिलियो, न्युटन , ब्रूनो र केपलरको ठूलो भूमिका रह्यो ।
अब हामीलाई स्पष्ट र प्रमाणित रूपमा थाहा छ, हाम्रो सौर्यमण्डलको केन्द्र सूर्य हो । सबै ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्छन् ।
सूर्य ‘मिल्की वे’(Milky Way) नामक आकाशगंगाको (Galaxy) एउटा मध्यम दर्जाको तारा हो । ब्रह्माण्डमा 'मिल्की वे' जस्ता खरबौं आकाशगंगाहरु छन् । ब्रह्माण्ड तथा हाम्रो आकाशगंगा 'मिल्की वे'मा सूर्यजस्ता एवं सूर्यभन्दा साना र सूर्यभन्दा ठूला ठूला अर्बौ ताराहरू रहेका छन् ।
हाम्रो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठूलो पिण्ड सूर्य नै हो । यसका साथ हामी बसेको पृथ्वीबाट आकाशमा देखिने सबैभन्दा ठूलो पिण्ड पनि सूर्य नै हो । तिमीहरुले कत्तिको ध्यान दियौ– मैले पृथ्वीबाट आकाशमा देखिने सबैभन्दा ठूलो पिण्ड सूर्य लेखेको हूँ ब्रह्माण्डको सबैभन्दा ठूलो पिण्ड लेखेको होइन। किनकि ब्रह्माण्डमा सूर्यभन्दा धेरै ठूला पिण्डहरु रहेका छन् । यी ठूला पिण्डको तुलनामा हाम्रो सूर्य त तिमीहरूले खेल्ने गुच्चा जत्रो पनि छैन । बेटलगुज (Betelgeuse) नामक तारा हाम्रो सूर्यभन्दा १ हज़ार गुना ठूलो छ ।
त्यसै गरी अर्को तारा 'भी वाई कैनीस मैजोरिस' ( V Y Canis Majoris) हो । यो हाम्रो सूर्यभन्दा झण्डै २ हज़ार गुना ठूलो छ । यो तारा यति ठूलो छ कि यदि यसलाई हाम्रो सूर्यको स्थानमा राख्ने हो भने यसले शनि ग्रहलाई छुन्थ्यो । 'भी वाई कैनीस मैजोरिस' तारा हामी बसेको पृथ्वीदेखि ३९०० प्रकाशवर्ष टाढा रहेको छ । यसको अर्थ यस ताराको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न ३९०० वर्ष लाग्छ । जस्तो कि तिमीलाई थाहा छ, सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न ८ मिनट २० सेकेण्डको समय लाग्छ । यसको एउटा अर्थ यो पनि हो, हामीले जुनसुकै बेला पनि सूर्यलाई ८ मिनट २० सेकेण्ड पछि मात्र देखिरहेका हुन्छौं । कथंकदाचित कुनै कारणले सूर्य नष्ट भयो भने हामीलाई ८ मिनट २० सेकेण्ड पछि मात्रै थाहा हुनेछ । किनकि नष्ट हुनु पूर्व सूर्यबाट निस्केको प्रकाश ८ मिनट २० सेकेण्डसम्म पृथ्वीतिर आइराख्छ र त्यति समयसम्म हामीले आकाशमा सूर्य देखिरहने छौं । यसैगरी 'कैनीस मैजोरिस' तारा कुनै दिन नष्ट भयो भने हामीलाई त्यसको खबर ३९०० वर्षपछि मात्रै थाहा हुनेछ । अहिले नै हामी जुन 'कैनीस मैजोरिस' तारा देख्छौ त्यो जीवित छ कि त्यसको प्रकाश मात्रै हामीसम्म आइरहेको छ यसबारे जान्ने कुनै उपाय हालसम्मको विज्ञानमा छैन ।
अब हाम्रै सूर्यको चर्चा गरौ । सूर्यको आकारको अनुमान पृथ्वीको तुलनामा बुझ्ने हो भने पृथ्वीको व्यास (Diameter) १२ हजार ७४२ किमी छ । सूर्यको व्यास भने १३ लाख ९२ हजार किमी छ । अनुमान गरी हेर त सूर्य पृथ्वीभन्दा कति गुना ठूलो छ ? थाहा पाइराख सूर्यभित्र पृथ्वी जस्ता १०९ वटा संरचना अटाउन सक्छन् ।
सौर्यमण्डलको कुल द्रव्यमानको (Mass) ९९.८ प्रतिशत द्रव्यमान सूर्यसँग रहेको छ । यो पृथ्वीको द्रव्यमानको तुलनामा ३ लाख ३२ हजार ९४६ गुणा बढी हो ।
सूर्यको द्रव्यमानमा सबैभन्दा बढी ‘हाइड्रोजन’को मात्रा छ । सूर्यमा ७३ प्रतिशत ‘हाइड्रोजन’, २५ प्रतिशत ‘हिलियम’ र बांकी २ प्रतिशतमा अन्य भारी तत्व जस्तै अक्सिजन, कार्बन, नियान, फलाम, नाइट्रोजन, सिलिकान, म्याग्नेसियम र सल्फर रहेका छन् ।
सूर्यको केन्द्रमा प्रतिसेकेन्ड ७० करोड़ टन ‘हाइड्रोजन’ बलेर ‘हिलियम’ मा बदलिन्छ । हाइड्रोजन बल्ने यस प्रक्रियामा प्रति सेकेण्ड ६९९५००० टन हीलियम निर्माण हुन्छ बाँकी को ५० लाख टन हाइड्रोजन ऊर्जामा (एनर्जी) परिवर्तित भएर सूर्यमा ताप र प्रकाश उत्पन्न हुन्छ । सूर्यमा बनेको यही प्रकाश र तापले गर्दा पृथ्वीमा जीवन सम्भव भएको हो । तिमीहरुलाई पत्याउन गाह्रो होला सूर्यको केन्द्रमा यसरी निर्माण भएको एनर्जीलाई सूर्यबाट बाहिर निस्किन १० हज़ार देखि १७ हज़ार वर्ष लाग्छ । तर यो सत्य पनि हो ,तथ्य पनि हो तिमी हामी जुन प्रकाशका किरण हेर्छौ ती सूर्यको केन्द्रमा १०-१७ हज़ार वर्ष पहिला निर्मित भएका हुन्छन् ।
पृथ्वीले आफ्नो धुरीमा (Axis ) घुमे जस्तै सूर्य पनि आफ्नो धुरीमा घुम्छ । सूर्यलाई आफ्नो धुरीमा घुम्न २७ दिनको समय लाग्छ । तर सूर्य अति विशाल एवं ठोस धरातलको नभएका कारणले यसको सबै भागले २७ दिनमा एउटा परिक्रमा पूरा गर्दैन। तिमीहरुलाई पदार्थको तीन वटा अवस्थाबारे ज्ञान होला । ठोस (Solid), द्रव (Liquid) र गैसीय (Gas)। तर सूर्यमा यी कुनै अवस्थाका पदार्थ छैनन् । सूर्यमा रहेका पदार्थको अवस्थालाई 'प्लाज़्मा' (Plasma) भनिन्छ । सूर्यमा रहेको हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, सल्फर आदि सबै 'प्लाज्मा' अवस्थामा छन् । हाम्रो सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा बढ़ी मात्रामा पदार्थ यसै 'प्लाज़मा' अवस्थामा रहेको छ किनकि अब यो सर्वविदित तथ्य हो , सौर्यमण्डलको ९९.८ प्रतिशत द्रव्यमान सूर्यसँग छ ।
पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गरे झैं सूर्यले आकाशगंगा ‘मिल्की वे’ को केन्द्रको परिक्रमा गर्छ । सूर्यलाई आफ्नो एउटा परिक्रमा पूरा गर्न २४-२५ करोड वर्षको समय लाग्छ । सूर्य बनेदेखि अहिलेसम्म यसले 'ग्यालेक्टिकल सेन्टर'को (Galactic Center) २० वटा परिक्रमा मात्र पूरा गरेको छ ।
सूर्यसँग अत्याधिक गुरुत्वाकर्षण ( Gravity) छ । यही गुरुत्वाकर्षणका कारण सबै ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्छन् । हाम्रो पृथ्वी त सूर्यसँग जम्मा १४ करोड ९६ लाख किमी टाढा छ । सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा रहेको ज्ञात क्षुद्रग्रह प्लूटो हो, जुन ३९ .५३ ‘एस्ट्रोनोमिकल यूनिट’ टाढा छ । सूर्यको प्रबल गुरुत्वाकर्षणका कारण प्लूटोले पनि सूर्यको परिक्रमा गर्छ ।
सूर्यमा पृथ्वी भन्दा २८ गुणा बढी गुरुत्वाकर्षण छ
जसरी पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा जानलाई ११ .२ किमी प्रति सेकेन्डको वेग चाहिन्छ । यो वेग नभएको खण्डमा अन्तरिक्षममा पठाउन खोजिएको कुनै पनि वस्तु पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण शक्तिका कारण भूमिमा ठोक्किन आइपुग्छ । यस गतिलाई पृथ्वीको पलायन वेग (Escape Velocity) भनिन्छ । यसरी नै सूर्यबाट माथि जानलाई ६१७ दशमलब ७ किमी प्रति सेकेन्डको वेग आवश्यक हुन्छ । यो पृथ्वीभन्दा ५५ गुना बढी हो । पृथ्वीको पलायन वेग ११.२ किमी प्रति सेकेण्ड हो भने सूर्यको 'इस्केप भेलोसिटी ' ६१७ दशमलब ७ किमी प्रति सेकेन्ड हो । सबै ग्रहको गुरुत्वाकर्षण शक्ति फरक फरक हुन्छ । गुरुत्वाकर्षण शक्ति फरक भएका कारण प्रत्येक ग्रहको पलायन वेग पनि फरक फरक रहेको छ ।
पृथ्वीमा गर्मी महिनामा कहिले काही कुनै कुनै स्थानमा तापक्रम ५०-५२ डिग्री सेन्टीग्रेडसम्म पुग्छ । खपीनसक्नु गर्मी हुन्छ । अन्दाज गर सूर्यको तापमान कति हुन्छ होला ?
सूर्यको केन्द्रको तापमान १.५ करोड डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ । यसैगरी सूर्यको बाहिरी सतहमा तापमान ५ हजार ६ सय डिग्री सेल्सियस हुने गर्छ ।
पृथ्वीमा जीवन सूर्यबाट प्राप्त हुने ताप र प्रकाशले सम्भव भएको हो । पृथ्वी सूर्यदेखि ''परफेक्ट ह्यभिटेबल जोन'' मा भएका कारण यहाँ तरल पानीको उपलब्धता सम्भव भएको हो । पृथ्वीमा सूर्यबाट आउने तापको मात्रा बढेमा हामीलाई बाँच्न चाहिने सारा पानी वाष्प बनेर वायुमण्डलमा उड्ने थियो र यसैगरी सूर्यबाट आउने ताप कम भएमा यहाँ पानीको सट्टा हिउँको साम्राज्य स्थापित हुने थियो ।
सूर्यबाट प्राप्त प्रकाशले नै पृथ्वीका समस्त वनस्पति जगतले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया (Photosynthesis) बाट आफ्नो भोजन बनाउँछन् । यसरी वनस्पतिले बनाएको भोजनबाट हामी भोजन प्राप्त गर्छौं ।
सूर्य नभए पृथ्वीमा जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । सूर्य नै पृथ्वीमा पाइने सबै किसिमको जीवनको आधार हो ।
स्थिति (Location ) : मिल्की वे आकाशगंगाको केन्द्रबाट २७ हज़ार प्रकाशवर्ष टाढा
व्यास (Diameter) : १३,९२००० किमी (पृथ्वीभन्दा १०९ गुना बढ़ी)
सूर्यको द्रव्यमान (Mass) : १.९८८५ ×१०३० किलोग्राम (पृथ्वीभन्दा ३३२९४६ गुना बढ़ी)
आयतन (Volume) :१.४१ ×१०१८ किमी (पृथ्वीभन्दा १० लाख गुना बढ़ी)
परिधि (Circumfrence) : ४.३७९ ×१०६ किमी (पृथ्वीभन्दा १०९ गुना बढ़ी)
क्षेत्रफल (Area) : ६.०९ ×१०१२ किमी (पृथ्वीभन्दा १२ हज़ार गुना बढ़ी)
औसत घनत्व (Avarage Density) : १.४०८ ग्राम /सेंटीमीटर३ (पृथ्वीको घनत्व ५.५१ ग्राम / सेंटीमीटर३ पृथ्वीको ०.२५५ मात्रै)
केन्द्रको घनत्व ( Center Density) :१६२.२ ग्राम /सेंटीमीटर३ ( पृथ्वीभन्दा २९ गुना बढ़ी)
गुरुत्वाकर्षण (Gravity) : २७४ मीटर /से२ ( पृथ्वीभन्दा २८ गुना बढ़ी)
पलायन वेग (Escape Velosity) : ६१७१७ किमी /से (पृथ्वीभन्दा ५५ गुना बढ़ी)
सूर्यको तापमान (Temperature)
केन्द्रको (Center) : १.५७× १०७ केल्भिन (K)
फोटोस्फेयरको (Photosphere) : ५,७७२ केल्भिन
कोरोनाको (Corona) : ५×१०६ केल्भिन
सूर्यको बितेकाे आयु (Age) : ४.६ अर्ब वर्ष
सूर्यको बाँकी आयु (Age) : झन्डै ५ अर्ब वर्ष
पृथ्वीदेखि सूर्यको दुरी (Distance) : १२ करोड़ ९६ लाख किमी अर्थात १ एस्ट्रोनोमिकल यूनिट अथवा ८ मिनट २० प्रकाश सेकेण्ड
मिल्की वेको केन्द्रबाट सूर्यको दुरी :२७२०० प्रकाश वर्ष
मिल्की वेको केन्द्रको परिक्रमामा लाग्ने समय (Galactic period) : २२.५ - २५ करोड़ वर्ष
मिल्की वेको परिक्रमा गर्ने गति :२२० किमी प्रति सेकेण्ड
अक्षको परिक्रमा गर्न लाग्ने समय (Sidereal rotation period) : २५.०५ -३४दशमलब ४ दिन ( पृथ्वी भन्दा २५ -३४ गुना बढ़ी समय लाग्ने)
सूर्यले अक्षको परिक्रमा गर्ने औसत गति:६०० मीटर प्रति सेकेण्ड ( पृथ्वीको परिभ्रमण गति 465 मीटर प्रति सेकेण्ड)
सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न लाग्ने समय : ५०० सेकेण्ड अर्थात ८ मिनट २० सेकेण्ड
मंगल ग्रहमा अवतरणकाे त्यो सात मिनेटकाे ‘आतङ्क’